Ozi 5 na-adịghị mma gbasara Medjugorje | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Aleteia na-edekọ gị na Medjugorje mgbe niile na-atụ aka na akwụkwọ ndị isi nke ofka, bụ nke ndị sayensị na-enyocha. Ma na web na netwọkụ mmekọrịta ọtụtụ hoaxes, akụkọ ụgha na nke na-egosi ajọ mbunobi, nke a na-ahụ n'ime ihe a na-akpọ "agbụ" na-aga n'ihu ịgbasa.
Anyị na-agba gị ume ka ị ghara ikwere ozi ọma dịka ndị anyị na-akọ n'okpuru, dị ka akụkọ na-adịghị mma nke adịgboroja.
1) Njide nke Mirjana
Afọ ole na ole gara aga kesara akụkọ banyere ebubo nke njide nke onye ọhụụ Mirjana, ọbụna were ya Il Giornale. N'etiti blọgụ ndị gbasara akụkọ a, "Onye ndọrọndọrọ ọchịchị" ma ọ bụ "Lavocea5stelle.altervista.org", wee gbaa ọchịchịrị. Kpachara anya n'ihi na hoax a ka na-agbasasị n'agbụ ụfọdụ:
“Medjugorje, enyo anyị anya banyere onye ọhụ ụzọ. Ffzụ ahịa na ụlọnga mgbochi. Ebubo dị ukwuu: aghụghọ ka njọ, mkparị, ọgba aghara nke enweghị ike, oriri na ọrịre nke LSD. E jidere ya n'otu n'ime "ememe nsọ" ya n'ihi ya na mpụ.
Scoop di Chi: Madonna ahụ gbara ọkụ n'ụlọ nwanyị ahụ, ikekwe kpuchie ya na phosphorescent agba
Ihe a nile bidoro site n'akwụkwọ ozi nke bishọp Anagni na Alatri, Lorenzo Loppa zipuru. Otu "okirikiri maka ndị ụkọchukwu parish" nke n'ezie ọ rịọrọ kagbuo nzukọ ekpere, ndokwa (...) na Fiuggi "(bufala.net).
2) 3 Hail Marys nke Ivan
Oge obula agha di n’uwa, aghaghari ozi a nke nne anyi di aso nke Medjugorje, nke enyere ya Ivan Dragicevic nke ohuru. Ozi a abụghị naanị ụgha, ejiri akọ na -efe site na Chains Chains.
“Ivan, otu n’ime ndị ọhụụ nke Medjugorje, na-ezipụ ozi a dị mkpa sitere n’aka Nwanyị anyị Nwanyị! Agha dị na Middle East na-aga ịghọ ihe dị oke egwu! Ọ ga-erukwa gafee ụwa! X kwụsị ya, ụwa niile ga-ekpe ekpere kwa nkeji! Ozugbo! Ndị ụkọchukwu ga-emepe ụzọ nke ụka ha ma kpọọ ndị mmadụ ikpe ekpere Rosary! Na-ekpesi ekpere ike! Kpee ekpere! Kpee ekpere! Kpee ekpere!
Kwa ubochi, elekere isii nke isi, ebe obula in’uwa n’uwa, hapu ihe nile, kpee ekpere Maril Maril !!! Zipu sms a n'uwa nile, ma karia ihe nile tinye ya n'ọrụ !!!! Ana m anata ma weghachite ".
3) Ihe adịgboroja Eucharistic adịgboroja
Ebube Eucharistic a sị na ọ mere afọ ole na ole gara aga na Medjugorje bụ akụkọ na-abụghị eziokwu. Ihe onyonyo edeputara na netwọkụ mmekọrịta na-egosi monstrance na Oriri Nsọ, na n’azụ ya ihu onye ụka parish ahụ Marinko Sakota.
N'ihu ihu, na onye nwe ụlọ, ihu Jizọs ga-apụta n'ụzọ adịghị mma.E nwekwara asịrị na onye ụkọchukwu parish ahụ, ndị ọhụụ na Nwanne nwanyị Emmanuel akwadoro ọnụnọ nke akara a. A tam nke na-agaghị agbanahụ ọtụtụ n'ime unu, mgbe niile Whatsapp patrons.
N'ezie, ọ tụgharịrị, ọ bụ ihe adịgboroja niile. Edere ihe oyiyi ahụ site na mmemme dị ka Photoshop. Ezigbo aghụghọ, aghụghọ nke dugara ọbụna ndị nwere obi abụọ na mbụ, na mbụ, ụfọdụ obi abụọ.
Sista Emmanuel kwuru banyere "hoax" ahụ: «Ka anyị zere ịgbasa ihe oyiyi na ozi nke anyị na-eleghara isi ya anya! Medjugorje achọghị mgbasa ozi ụgha "(today.it).
4) Mmụọ ozi nke Thailand
Nọgide na -efegharị ma na-atụle akụkọ gbasara mpụtara mmụọ ozi na igwe ojii n'ime obodo Medjugorje.
Edebere foto ahụ na cyclically na Facebook, agbanyeghị na ọ nọchiri anya ogbugba Isres Chorphaka nke were onyonyo ahụ na Thailand. Onye na - ese foto ahụ agwala otu o siri see foto ahụ, na ọ bụ ngosipụta Chukwu ma ọ bụ na ọ bụghị, onyonyo a agaala ụwa niile, na ọ dị mfe ịfụfụ.
N'ezie, ị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ saịtị, yana ebe akpọrọ ya: Grand Obí nke Bangkok. Ya mere, “"gagharị” nke ezigbo foto iji dọta echiche.
5) Ndi nzuzu nke Anyanwu
Youtube na - edebe nde kwuru nde banyere ihe ịtụnanya dị ịtụnanya mere na igwe nke Medjugorje. Karịsịa, ntụgharị dị iche na ngagharị nke anyanwụ na igwe ojii n’ihu Jizọs ma ọ bụ Madonna.
E wezụga ndụmọdụ na vidiyo dị ka nke anyị biputere nwere ike iweta, n'ọnọdụ ụfọdụ, a na-emetụta ha kpọmkwem na igwefoto ọkachamara ma ọ bụ ekwentị.
Si na medjugorje.altervista.org